Lalao sy fangatahana amidy mandritra ny fotoana voafetra (28 Desambra) | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana amidy mandritra ny fotoana voafetra (28 Desambra)
Androan'ny adala aprily anio, ary ampahatsiahiviko fa tsy hifarana raha tsy amin'ny sasakalina anio alina. Ary na dia azoko antoka aza fa mihoatra ny iray aminareo no handray vaovao diso maro izay mbola miparitaka amin'ny tambajotra ankehitriny, manome toky anao aho fa Afaka milamina ianao satria ireto lalao sy fampiharana manaraka ireto dia amidy amin'ny tena izy, tsy misy vazivazy.
Mazava ho azy, ny Adala Aprily toy ny mahazatra dia ny manome toky anao izany manan-kery ny tolotra amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity. Mandra-pahoviana no afaka manararaotra ireo fihenam-bidy? Marina tokoa, tsy misy hevitra. Manana safidy roa ianao: (1) anontanio mivantana ny mpamorona na (2), aza mieritreritra indroa ary tsindrio ny rohy fampidinana mivantana mankany amin'ny App Store, izay no hataoko ho anao.
2 Fanarahana teti-bola sy fandaniana
3 Energy Saver - Mahazo vola ary mitahiry ny Planet
4 Lisitry ny fivarotana enina - Aza adino ny mividy
5 Ity Ady avy amin'ny Ahy
Nomarihin'i TouchArcade ho iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny taona 2016, amin'ny Crashlands Horaisinao ny mombamomba an'i Flux Dabes, kamio iray galactic izay hametraka ny fandefasana azy farany vokatry ny fandrahonana vahiny antsoina hoe Hewgodooko, ary hamela anao hitokana amin'ny planeta vahiny. Rehefa te-hamerina ny fonosanao ianao dia ho voafandrika amin'ny drafitra fanjakan'izao tontolo izao izay mitaky ny fahaizanao rehetra. Tsy maintsy mianatra fikafika sy zava-miafina eo an-toerana ianao, mahazo namana vaovao, ary amin'ny farany manangana "trano lavitra ny trano rehefa mianatra mivoatra amin'ny planeta Woanope."
Crashlands Izy io dia manana vidiny 4,99 euro mahazatra nefa azonao atao izao miaraka amin'ny fihenam-bidy 60% amin'ny € 1,99 ihany
Fanarahana teti-bola sy fandaniana
Fanarahana teti-bola sy fandaniana dia fitaovana iray izay dia hanampy anao hanaraka ny fandanianao amin'ny fomba "mora sy tsotra". Azonao atao ny mitantana ny fandanianao isan'andro mba hahalalana hoe lasa aiza ny volanao. Ny asany maro dia misy ny safidy hamoronana teti-bola manokana, fampidirina amin'ny kalandrie iOS teratany, backup amin'ny alàlan'ny iCloud, fampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana, fanaovana tatitra, famoronana statistika, fanondranana data amin'ny endrika Excel (CVS). amin'ny taham-panakalozana, famoronana sokajy ary fanovana ho an'ny fandanianao, sns.
Fanarahana teti-bola sy fandaniana Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
Energy Saver - Mahazo vola ary mitahiry ny Planet
«Energy Saver dia ny fomba haingana indrindra hitsitsiana vola »amin'ny fanjifana angovo. Ho azonao atao ny mijery ny antontan'isa feno momba ny fampiasanao angovo mandritra ny iray andro na mandritra ny herintaona ary hanome anao hevitra hampihenana ny fanjifana angovo izany ary hitsitsy vola.
Makà torohevitra hampihenana ny fanjifana angovo sy hitehirizana vola
Jereo ny antontan'isa feno amin'ny fampiasanao angovo
Jereo ny latabatra fanjifana angovo isaky ny efitrano ao an-tranonao
Safidio ny fomba tianao hikajiana ny valiny, mandritra ny iray andro na mandritra ny herintaona
Energy Saver - Mahazo vola ary mitahiry ny Planet Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro saingy azonao atao maimaim-poana tanteraka izany mandritra ny fotoana voafetra.
Impiry ianao no niverina avy nanao fiantsenana isan-kerinandro ary rehefa tonga tany an-trano dia tsapanao fa nanadino nividy zavatra na zavatra hafa ianao? Miaraka amin'ny Grocery List dia tsy hitranga aminao intsony izany satria fampiharana manokana ho an'ny ataovy ny lisitra fiantsenana Tandremo anefa, satria tsy lisitra tsotra izy io satria manana fiasa be dia be izay tianao.
Lisitry ny fivarotana enina - Aza adino ny mividy Izy io dia manana vidiny 2,99 euro mahazatra nefa azonao atao izao miaraka amin'ny fihenam-bidy 66% amin'ny € 0,99 ihany
Ity Ady avy amin'ny Ahy
Ahy ity ady ity mampino izany lalao tetikady ady tsy toy ny zavatra hitanao hatreto satria amin'ity tranga ity dia tsy hihevitra ny maha-miaramila anao ianao izay miady amin'ny ady mihosin-dra, fa kosa ianao dia ho vondron'olona volo mitokana ao amin'ny tanàna fahirano ady. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra sarotra ianao, izay hizaha toetra ny etika sy ny fitondran-tenao, nefa miaraka amina tanjona tokana: ny fahavelomana
Ahy ity ady ity Izy io dia manana vidiny 14,99 euro mahazatra nefa azonao atao izao miaraka amin'ny fihenam-bidy 80% amin'ny € 2,99 ihany
Ity Ady avy amin'ny Ahy€ 14,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana amidy mandritra ny fotoana voafetra (28 Desambra)
Apple dia mandray 44% amin'ny fampandehanana fitaovana vaovao any Etazonia